Nandritra ny fandraisam-pitenenany no nanamafisany fa manohana ny hatrany ny ezaka ataon’ny OIT hanatsarana ny tontolon’ny asa i Madagasikara. Niharijary ary notsipihan’ny fivoriambe rahateo ireo ezaky ny fitondrana Malagasy hanatsara ny sehatry ny asa sy ny fari-piainan’ny mponina eto amintsika.
Teto genève, nandritra ny andiany faha 108 amin’ny fikaonandoha maneran-tany ho an’ny asa, nahazo ny anjara toerany sy ny voninahiny manokana ny firenena Malagasy. Niarahaba manokana ny filohan’ny repoblika Andry RAJOELINA ary nankasitraka ny ezaky ny firenena Malagasy ankehitriny ny fivoriambe.
« Hafaliana ho ahy ny miarahaba an’Atoa hajaina Andry Nirina RAJOELINA, filohan’ny Repoblikan’I Madagasikara. Atoa Filoha, amin’ny anaran’ny fikambanana iray manontolo, mamela ahy ianao hiarahaba anao manokana sy haneho fisaorana ny amin’ny nanotronanao izao fivoriambe izao. I madagasikara dia mpikambana nanomboka ny taona 1960, fa ianao atoa Filoha dia nanipika manokana ny tsy maintsy hanafainganana ny fampandrosoana ny firenenao, ny fametrahana ny mangarahara, ny fananganana fotodrafitr’asa, ny fanohanana sy fampivelarana ny tanora amin’ny alalan’ny fanomezana sehatra azy ireo ho amin’ny fandraharahana. Androany atoa Filoha, miara-mibanjina ny ho avy isika, ao anatin’ny ezaka ataonao hiadiana amin’ny fahantrana, hanatsarana ny fiaianan’ireo olom-pirenena Malagasy ary hanome ho avy tsaratsara kokoa ho azy rehetra”
Nohamafisin’ny filohan’ny Repoblika Andry RAJOELINA, nandritra ny lahateniny, fny fametrahana ho laharam-pahamehana ny fanatsarana ny fiainan’ny mponina sy ny tontolon’ny asa eto Madagasikara. Notsipihany ny fanomezana asa mendrika ho an’ny Malagasy rehetra. Antony nijeren’ny fanjakana ny nampiakarana ny karaman’ireo mpiasa sy anohanana ny fandraharahana indrindra ho an’ny tanora.
Nantitranterin’ny filoha teto ihany koa fa eo anilan’ny OIt I Madagasikara amin’ny ady atao amin’ireo fomba mamohehatra eo amin’ny tontolon’ny asa. Nanao antso avo ho an’ireo mpikambana ao amin’ny OIT ny filoha Andry Rajoelina mba hifanome tanana hiady amin’ireo endrika fanandevozana maoderina sy fanararaotana atao amin’ireo mpiasa. Ohatra nanehoany izany ny nampodian’ny fanjakana an-tanindrazana ireo vehivavy Malagasy niasa tany koweit. Laharahampahamehana amin’ny politika ankapoben’ny fanjakana Malagasy, hoy izy, ny asa mendrika ho an’ny rehetra ary ny tanjon’i Madagasikara ny hanafoana ny asa an-terivozona, ny fanandevozana maoderina, ny fanondranana olona an-tsokosoko ary ny fandrarana ny endrika fampiasana zaza tsy ampy taona ao anatin’ny 10 taona.